ဒီစာလေးကို အခုခြိနျမှာခငျဗြားတို့ဖတျမိရငျ အခြိနျမီကောငျးမီနိုငျပါသေးရဲ့ – Shwe Thadin
တကယျလို့ တဈနနေ့မှေ့ာ မငျးကို မှေးဖှားခဲ့တဲ့ လူနှဈယောကျ လောကကွီးထဲက ထှကျခှာသှားပွီဆိုရငျ။ ဒီလောကမှာ မငျးနဲ့သှေးခငျြးအရငျးနှီးဆုံး လူနှဈယောကျ မရှိတော့ဘူးလို့ နားလညျပါ။ဒါကွောငျ့ မိဘတှရှေိတုနျးမှာ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျဆကျဆံပါ…မိဘတှကေို မငျးအတှကျ စိတျမပူပါစနေဲ့။
မိဘတှေ လိုခငျြတာက သားသမီးတှဆေီက ပိုကျဆံတှထေကျ သားသမီးတှရေဲ့ အဖျောပွုပေးမှုပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သားသမီးတှဆေိုတာ မိဘတှရေဲ့ နှလုံးသညျးပှတျ ဖွဈနလေို့ပါပဲ။ တကယျလို့ တဈနနေ့ေ့ မှာ မငျးကို မှေးဖှားခဲ့တဲ့ လူနှဈယောကျ လောကကွီးထဲက ထှကျခှာသှားပွီဆိုရငျ
ဒီလောကမှာ မငျးကို စိတျရငျးစတေနာ နှေးထှေးတဲ့အကွငျနာနဲ့ယုယစှာခဈြမဲ့သူနှဈယောကျ ဆုံးရှုံးသှားပွီလို့ နားလညျပါ။ ဘယျမိဘကမှ သူတို့ရဲ့ အုတျဂူရှမှေ့ာ သားသမီးတှပေူဆှေးနတောကို ကွညျ့ရကျမှာ မဟုတျပါဘူး ဒါကွောငျ့ အခြိနျရပွီဆိုတာနဲ့အိမျကိုပွနျပွီး မိဘတှနေဲ့ တှပေ့ါ….
ကိုယျ့အိမျ မဟုတျတဲ့ စားသောကျဆိုငျ ပြျောပှဲစားရုံတှမှော အခြိနျကုနျနမေဲ့အစား မိဘရဲ့ ရငျခှငျမှာ ပြျောရှငျပါ….။ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိဘတှဆေိုတာ သားသမီးတှေ ပွနျလာမှာကို မြှျောလငျ့နတေတျလို့ပါပဲ….တကယျလို့ တဈနနေ့မှေ့ာ မငျးကို မှေးဖှားခဲ့တဲ့ လူနှဈယောကျ လောကကွီးထဲက ထှကျခှာသှားပွီဆိုရငျ
ဒီလောကမှာ မငျး ထမငျးမစားခငျြတဲ့အခါ.. ဂရုတစိုကျ ကြှေးမှေးမဲ့သူနှဈယောကျ မရှိတော့ဘူးလို့ နားလညျပါ။ ဒါကွောငျ့အပွငျမှာ ဘယျလောကျ အလုပျမြားမြား…အိမျပွနျပွီး မိဘတှနေဲ့အတူတူ ထမငျးလကျဆုံစားပါ…ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိဘတှမေရှိတော့မှ သူတို့နဲ့အတူတူ ထမငျးစားခငျြလို့ မရနိုငျတော့လို့ပါပဲ။
တကယျလို့ တဈနနေ့မှေ့ာ မငျးကို မှေးဖှားခဲ့တဲ့ လူနှဈယောကျ လောကကွီးထဲက ထှကျခှာသှားပွီဆိုရငျ…. ဒီလောကမှာ …မငျးကို နကေောငျးရဲ့လား …အလုပျအဆငျပွရေဲ့လား…ပိနျသှားလား..၀ နလေား..ဆိုပွီး ဂရုစိုကျမဲ့ သူနှဈ ယောကျ မရှိနိုငျတော့ဘူးလို့ နားလညျပါ။
တကယျတော့ လူတဈယောကျကို ဂရုစိုကျရတယျဆိုတာ အပငျပနျးဆုံးပါပဲ…တျောရုံလူက မငျးကို အမွဲ ဂရုစိုကျနဖေို့ဆိုတာ မလှယျပါဘူး။ဒါကွောငျ့ မိဘတှေ နမေကောငျးတဲ့အခါ…သူတို့ကို အထူး ဂရုစိုကျပါ…အဝေးရောကျနခေဲ့ရငျလဲ
မိဘတှနေဲ့အမွဲဖုနျးဆကျသှယျပါ…ကိုယျ့ရဲ့အခွအေနကေို ပွောပွသလို မိဘတှရေဲ့ကနျြးမာရေးကိုလဲ အ လေးထားပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ နာမကနျြးတဲ့အခါ…အတမျးတဆုံးက မငျးဆီက မတ်ေတာဖွဈနလေို့ပါ။
တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ မင်းကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက် လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်။ဒီလောကမှာ မင်းနဲ့သွေးချင်းအရင်းနှီးဆုံး လူနှစ်ယောက် မရှိတော့ဘူးလို့ နားလည်ပါ။ဒါကြောင့် မိဘတွေရှိတုန်းမှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါ…မိဘတွေကို မင်းအတွက် စိတ်မပူပါစေနဲ့။
မိဘတွေ လိုချင်တာက သားသမီးတွေဆီက ပိုက်ဆံတွေထက် သားသမီးတွေရဲ့ အဖော်ပြုပေးမှုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သားသမီးတွေဆိုတာ မိဘတွေရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့ မှာ မင်းကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက် လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်
ဒီလောကမှာ မင်းကို စိတ်ရင်းစေတနာ နွေးထွေးတဲ့အကြင်နာနဲ့ယုယစွာချစ်မဲ့သူနှစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ နားလည်ပါ။ ဘယ်မိဘကမှ သူတို့ရဲ့ အုတ်ဂူရှေ့မှာ သားသမီးတွေပူဆွေးနေတာကို ကြည့်ရက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့် အချိန်ရပြီဆိုတာနဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြီး မိဘတွေနဲ့ တွေ့ပါ….
ကိုယ့်အိမ် မဟုတ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင် ပျော်ပွဲစားရုံတွေမှာ အချိန်ကုန်နေမဲ့အစား မိဘရဲ့ ရင်ခွင်မှာ ပျော်ရွှင်ပါ….။ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိဘတွေဆိုတာ သားသမီးတွေ ပြန်လာမှာကို မျှော်လင့်နေတတ်လို့ပါပဲ….တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ မင်းကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက် လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်
ဒီလောကမှာ မင်း ထမင်းမစားချင်တဲ့အခါ.. ဂရုတစိုက် ကျွေးမွေးမဲ့သူနှစ်ယောက် မရှိတော့ဘူးလို့ နားလည်ပါ။ ဒါကြောင့်အပြင်မှာ ဘယ်လောက် အလုပ်များများ…အိမ်ပြန်ပြီး မိဘတွေနဲ့အတူတူ ထမင်းလက်ဆုံစားပါ…ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိဘတွေမရှိတော့မှ သူတို့နဲ့အတူတူ ထမင်းစားချင်လို့ မရနိုင်တော့လို့ပါပဲ။
တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ မင်းကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက် လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်…. ဒီလောကမှာ …မင်းကို နေကောင်းရဲ့လား …အလုပ်အဆင်ပြေရဲ့လား…ပိန်သွားလား..၀ နေလား..ဆိုပြီး ဂရုစိုက်မဲ့ သူနှစ် ယောက် မရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ နားလည်ပါ။
တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်ကို ဂရုစိုက်ရတယ်ဆိုတာ အပင်ပန်းဆုံးပါပဲ…တော်ရုံလူက မင်းကို အမြဲ ဂရုစိုက်နေဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် မိဘတွေ နေမကောင်းတဲ့အခါ…သူတို့ကို အထူး ဂရုစိုက်ပါ…အဝေးရောက်နေခဲ့ရင်လဲ
မိဘတွေနဲ့အမြဲဖုန်းဆက်သွယ်ပါ…ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကို ပြောပြသလို မိဘတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလဲ အ လေးထားပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ နာမကျန်းတဲ့အခါ…အတမ်းတဆုံးက မင်းဆီက မေတ္တာဖြစ်နေလို့ပါ။